यी नेपाली कम्पनिका आयुर्वेदिक औषधिको सेवनले बढाउँदै ह्वात्तै यौन शक्ति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
यी नेपाली कम्पनिका आयुर्वेदिक औषधिको सेवनले बढाउँदै ह्वात्तै यौन शक्ति
बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ १६:१४ मा प्रकाशित !
अश्वगन्धा : यो यौन शक्ति बढाउने लाभदायक आयुर्वेदिक औषधि हो । वैद्यखानाबाट उत्पादित अश्वगन्धाले यौन शक्ति बढाउनुका साथै शरीरलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । शरीरको स्फूर्ति बढाउँछ । सुस्त यौन ईच्छालाई बढाउँछ । अश्वगन्धा बिरामी भएको वा नभएको दुवैले खान सकिन्छ ।ब्लड प्रेसर भएका व्यक्तिले अश्वगन्धा धेरै समय खाएमा प्रेसर बढ्न सक्छ तर सामान्यतः असर गर्दैन । अश्वगन्धा दिनमा दुई पटक खान सकिन्छ । यो धुलो हुन्छ ।
बाजिकर : यौनशक्ति बढाउने अत्यन्तै प्रभावकारी आर्युवेदिक औषधि हो यो । यसको सेवनले यौन दुर्बलता हटाउँछ । शरीरमा स्फूर्ति ल्याउँछ । बाजिकरमा अश्वगन्धा, मुस्ली, सतवारी तथा कपीकच्छुलगायतका जडिबुटी मिसिएको हुन्छ । यो दिनमा दुई पटकसम्म खान सकिन्छ । एक पटकमा एक चम्चा खान सकिन्छ । यो महिला पुरुष दुनै जनाले खान सकिन्छ । यौन क्षमतामा कमी आयो वा शारीरिक अशक्तता भयो भने बाजिकरको सेवनले फाइदा गर्छ ।यसले नसा तथा हड्डीलाई बलियोसमेत बनाउँछ । यसमा भिटामिन, खनिज तथा मिनरल्स पनि पाइन्छ । वर्षमा दुई महिनासम्म यसको सेवन गर्दा शरीर मजबुत बनाई यौन क्षमता बढाउँछ । दुई महिनाभन्दा धेरै नखाएकै राम्रो । यसले शरीरलाई न्यानोसमेत गराउँछ । बालाबालिकाको हकमा भने चिकित्सकको सल्लाहविना प्रयोग गर्नुहुँदैन । बच्चा भएको छैन भने यसको सेवनले यौन शक्ति बढाएर बच्चा बस्न सक्छ । वैद्यखानाबाट उत्पादित बाजिकर शक्ति शास्त्रअनुसार नै बनेकाले गुणस्तर राम्रो छ । बाजिकर १० देखि १५ ग्रामसम्म दैनिक दुईपटक दूधमा खान सकिन्छ ।
च्यवनप्राश पनि स्पेशल, सुगर फ्री र जनरल गरी तीन प्रकारका छन् । च्यवनप्राश बिहानबेलुका दैनिक एक—एक चम्चा खान सकिन्छ । स्पेसल च्यवनप्राश १८ वर्षभन्दा कम उमेरकोले नखाएकै राम्रो हुन्छ । १८ भन्दा कमकोले जेनेरल (नर्मल) च्यवनप्राश खानुपर्छ । यौन दुर्बलतासम्बन्धी समस्या आए स्पेसल च्यवनप्राश खान सकिन्छ । स्पेशल च्यवनप्राश धेरै समय ब्लड प्रेसर भएका व्यक्तिले खाएमा प्रेसर बढ्न सक्छ । यसले ठूलो असर भने हुँदैन । समाचारपत्रमा खबर छ ।
PREVIOUS POST Previous post: माओबादी-एमालेको एकता भोली नै हुदै , ४ सय जना केन्द्रीय सदस्य हुने !
NEXT POST Next post: बालुवाटारमा एकता संयोजन समितिको बैठक जारीः माओवादी केन्द्र एमाले रआजै विघटन हुने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ १६:१४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ १६:१४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ १६:१४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ १६:१४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ १६:१४